वियरले फाइदा पनि गर्छ !
वियर ! कसैले स्वाद लिएर पिउँछन्, कसैले लहैलहैमा । केहीलाई वियरको स्वाद नै पत्तो हुँदैन । केही मानिसहरु वियर खाँदा असर गर्छ भन्ने सोचाइ राखेर र वियरलाई मादकपदार्थ मानेर कहिल्यै पिउँदैनन् पनि । केहीले मन नलागेरै नलिएको पनि भन्ने गर्दछन् ।
वास्तवमा वियरले असर मात्रै होइन फाइदा पनि गर्छ भन्ने ज्ञान कमैलाई छ । केही समयअघि अमेरिकामा भएको एक अध्ययनले वियरले मानिसको स्वास्थ्यमा फाइदा गर्ने देखाएको थियो ।
सो अध्ययनअनुसार वियर पिउने मानिसलाई मिर्गौलाको पत्थरी हुने खतरा वियर नपिउने व्यक्तिको तुलनामा निकै कम हुन्छ भनेको छ । तर एकैपटक धेरै अथवा आफ्नो शरीरले थेग्न सक्ने भन्दा बढी पिउनु भने हितकर हुँदैन । त्यो भने स्वास्थ्यका लागि अहीत नै हुन्छ ।
कसरी फाइदा ?
अध्ययनअनुसार वियर पिउने मानिसलाई धेरै छिटो छिटो पिसाब लाग्छ । पत्थरीमा हुने मुख्य तत्वलाई वियरले घोलेर पिसाबसँग बाहिर निकाल्छ । र त्यसले व्यक्तिको मिर्गौलालाई सफा राख्दछ । अर्को कुरा मिर्गौला आफैं बढी झोल पदार्थ खोज्ने शरीरको एक अंग हो । त्यसले शरीरलाई सशक्त र तन्दुरुस्त राख्न काम गरिरहेको हुन्छ । कम पानी पिउने व्यक्तिलाई पनि बढी पिसाबको समस्या हुने गरेको पाइन्छ । पिसाबमा समस्या हुँदा मिर्गौलामा समस्या देखिने गर्दछ । र धेरै व्यक्तिलाई पछिल्लो समय मिर्गौलामा पत्थरी देखिने गरेको पनि छ ।
अर्को कुरा वियर पिउनेहरुलाई कोलेस्टरोल भएमा हल्का मात्रामा वियर खाने हो भने कम हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तै स्ट्रोकको खतरालाई पनि केही कम गर्न मद्दत पुग्ने अनुसन्धानहरुले देखाएको छ ।
यस्तै रक्त संचारलाईसमेत वियरले केही सहज बनाउने गरेको बताइन्छ । शरीरमा भएका हड्डीलाई दह्रो बनाउन पनि वियरले मद्दत गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । वियरमा हुने सिलिकन तत्वले हड्डीलाई बलियो बनाउने गर्दछ ।
यसैगरी मधुमेहका बिरामीलाई पनि वियर फाइदाजनक छ । दिनमा एक गिलास वियर पिउँदा टाइप २ नामको मधुमेह हुने खतरा २५ प्रतिशतले घट्ने बताइन्छ ।
यस्तै दिमागको सम्झने क्षमतालाई पनि वियरले दरिलो बनाउँछ । अल्जाइमर भएका मानिसलाई वियर लाभदायक मानिन्छ ।
यसरी हेर्दा मात्रा मिलाएर वियर खाने मानिसलाई भने वियरले हानी नभएर फाइदा नै गर्छ भन्न सकिन्छ ।
पाचन प्रणाली पनि बलियो
वियरले मिर्गौलालाई मात्रै होइन शरीरको पाचन प्रणालीलाई पनि दह्रो बनाउँछ भनिन्छ ।
दुई वर्ष अघि युनिभर्सिटी अफ लन्डन कलेजमा गरिएको एक अध्ययनले वियरका कारण मोटोपना बढ्छ भन्ने भनाइलाई पनि गलत सावित गरिदिएको थियो । सो अध्ययनले पाचन प्रणाली दह्रो हुँदा मोटोपना पनि घट्ने सो अध्ययनको निष्कर्ष थियो । तर सोधकर्ताहरुले वियरले भोक भने बढाउने तथ्य फेला पारेका थिए ।
थोरै मात्रामा वियर पिउदा शरीरलाई हानी नोक्सानी गर्दैन । थोरै भनेको कति भन्ने अनुमान लगाउन भने आफ्नो शरीरअनुसार तपाईं आफैंले ख्याल गर्नु पर्छ । कतिपयले वियर पिउने निहुँमा अरुलाई देखाउन जबरर्जस्त पनि गर्दछन् । त्यो भने ठीक होइन ।
तपाईलाई सधैं वियर पिउने बानी छ भने आफूले कति पिउने भन्ने अनुमान हुन्छ । यदी बानी छैन भने तपाईंले एक गिलास वियरबाट शुरु गर्दा अन्यथा हुँदैन । किनकि बोतलभरीको वियरलाई तपाईंको शरीरले नथेग्न पनि सक्छ ।
पानी बढी पिउने व्यक्तिलाई वियर धेरै आवश्यक पनि पर्दैन । यदी कुनै व्यक्तिलाई पानी कम पिउने बानी छ तर वियर चाहेजति पिउन सक्ने हुन्छ भने त्यो पनि अहीतकर हुँदैन । वियरले शरीरमा पानीको मात्रालाई पनि पूर्ति गर्छ ।
अमेरिकाको खाद्य विभागले वियरलाई पानीको विकल्प नै मानेको छ । तर वियर पिउँदा त्यसमा अल्कोहल पनि हुन्छ भन्नेमा भने ख्याल गर्नै पर्छ । त्यसले व्यक्तिलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रै पिउन बाध्य बनाउँछ ।
कुन समय पिउने ?
वियर पिउने समय स्थान र अनुभवअनुसार फरक फरक हुन्छ । कसैले वियरलाई काम गर्ने ऊर्जा र सहाराका रुपमा पनि लिएर पिउने गर्दछन् । कसैले काम सकेपछिको समयमा आफूलाई आराम महसु गराउनका लागि पनि रुचाउँने गर्दछन् ।
तर नेपाल जस्तो मुलुकमा भने वियरलाई काम गर्दाको समयमा पिउने व्यक्ति कमै छन् । यहाँ कामको थकानपछि आफूलाई आरामको आभाष दिन वियर पिउने गरिएको पाइन्छ ।
कतिपयले भने वियर नियमित पिउने पनि गरेका छन् । कतिपयले वियरलाई उत्सव वा चाड पर्वमा मात्रै पनि खुसीको सारथी मान्ने गरेका छन् । तर जे जस्तो भए पनि नेपाली समाज अनुसारको यसको प्रयोग भने साँझ वा रातिको समयमा उपयुक्त र सुहाउँदो हुने अनुभवीहरुको बुझाइ हुने गर्दछ ।